China Volar kpochidoro efere ụlọ ọrụ na-emepụta | Shuangyang
Efere mkpọchi Volar
——Oblique isi ụdị
Ngwunye trauma maka efere mkpọchi volar bụ sistemụ zuru ezu iji lebara ọtụtụ ụzọ mgbaji anya. Site na mbadamba ihe eji eme ihe na-egosi nkwado nkwado na oghere combi, a na-enweta ọgwụgwọ nke azụ na mgbatị dị ala.
1. Emepụtara na titanium na teknụzụ nhazi dị elu;
Ngwunye nke efere mkpọchi volar kwesịrị ekwesị maka radius volar, mmerụ ọ bụla nke na-akpata njide njide na radius dị anya.
Ejiri maka Φ3.0 orthopedic kpochidoro ịghasa, Φ3.0 orthopedic cortex screw, kwekọrọ na usoro 3.0 usoro ịwa ahụ.
Aka ekpe 3 Oghere
Ihu 3 Oghere
Aka ekpe 4 Oghere
Ihu 4 Oghere
Aka ekpe 6 Oghere
Nri 6 Oghere
Efere mkpọchi Volar maka ọgwụgwọ nke mgbawa dịpụrụ adịpụ na ma ọ bụ na-enweghị mmụba ọkpụkpụ adịghị emetụta nsonaazụ redio. N'ime mgbaji agbaji, mgbakwunye ọkpụkpụ ọzọ adịghị mkpa ma ọ bụrụ na a na-eme mbelata anatomical na ndozi mgbe o kwere omume.
Ojiji nke mkpọchi mkpọchi volar maka ịwa ahụ nke mgbatị mgbatị dị iche iche aghọwo ihe a ma ama. Otú ọ dị, a kọọrọ ọtụtụ nsogbu metụtara ụdị ịwa ahụ a, gụnyere mgbawa aka. Mgbapu nke aka na-eme ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị na mpempe akwụkwọ dị otú ahụ na 19981 na 2000,2. Ọnọdụ a na-akọ na mpempe akwụkwọ mkpịsị ụkwụ na-eme ka ọkpụkpụ jikọtara ya na iji mpempe mkpọchi volar maka mgbawa mgbapụta dị na 0.3% gaa na 12% .3,4 Iji belata ndapụta nke mpempe akwụkwọ flexoris longus tendon rupture mgbe volar plate fix of distal okirikiri mgbaji ọkpụkpụ, ndị na-ede akwụkwọ lebara anya na ntinye nke efere ahụ. N'ime usoro ndị ọrịa nwere mgbatị dịpụrụ adịpụ, ndị ode akwụkwọ nyochara ihe omume kwa afọ na ọnụ ọgụgụ nke nsogbu metụtara usoro ọgwụgwọ. Nnyocha a na-eme ugbu a nyochara nsogbu nke nsogbu mgbe ịwachara ahụ maka mgbawa mgbapụta na mpempe akwụkwọ mkpọchi volar.
Enwere mgbagwoju anya nke 7% na usoro nke ndị ọrịa ugbu a nwere mgbatị na-adịghị ala ala na-emeso ya na ndozi ịwa ahụ na efere mkpọchi volar. Nsogbu ndị ahụ gụnyere ọrịa ọwara carpal, ọrịa akwara nke ikuku, ọnụọgụ edemede, na mgbawa aka. Usoro mmiri ahụ bụ akara ngosi ịwa ahụ bara uru maka ịtọfere efere mkpọchi volar. Onweghi nsogbu mgbatị ụkwụ na-agagharị nke mere n'etiti ndị ọrịa 694 n'ihi na a kpachapụrụ anya banyere mmekọrịta dị n'etiti ịkụbanye na akaị.
Nsonaazụ anyị na-akwado na mkpọchi mkpọchi a na-akpọ volar bụ ọgwụgwọ dị mma maka mgbatị na-adịghị ahụkebe nke na-adịghị ahụkebe, na-enye ohere ịmalite nrụzigharị oge mbụ ka ọ ghara ịmalite.
Nke gara aga: Volar Dorsal kpochidoro efere
Osote: Distal Volar kpochidoro efere
3.0 4.0 5.0 ckingkpọchi rewghasa
6.5 cannulated kpochidoro ịghasa
Multi-axial Mpụtaral Tibia Plateau kpochidoro efere ...
Posteromedial Tibia Plateau Mkpọchi efere
Posterior Tibia Plateau Locking Plate